परमेश्वरको राज्यबारे साँचो कुरा—आध्यात्मिक भोजन बाँड्‌ने | परमेश्वरको राज्य
कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं आफ्नो बाइबल विद्यार्थीलाई कुनै एउटा बाइबल पदको अर्थ बुझाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईंको कुरा सुनेर तिनको अनुहार उज्यालो हुन्छ। अनि तिनी यसो भन्छन्‌, “हामी सधैंभरि सुन्दर पृथ्वीमा बाँच्न सक्छौं भनेर के बाइबलले साँच्चै सिकाउँछ?” तपाईंसँगै प्रचारमा जाने साथी मुस्कुराउँदै यसो भन्छन्‌, “तपाईंले भर्खरै बाइबलमा त्यही कुरा पढ्‌नुभयो नि, होइन?” अचम्म मान्दै तपाईंको विद्यार्थी यसो भन्छन्‌, “यस्तो कुरा मैले कहिल्यै सिकेको थिइनँ!” केही हप्ताअघि सृष्टिकर्ताको नाम यहोवा हो भनेर पहिलो पटक थाह पाउँदा पनि तिनले त्यस्तै भनेका थिए।
प्रचारमा जाँदा तपाईंले सायद यस्तै मानिस भेट्‌नुभएको होला। हाम्रा थुप्रै भाइबहिनीले पनि यस्तै अनुभव बटुलेका छन्‌। हामीले पाएको सत्यको ज्ञान कत्ति बहुमूल्य छ भनेर यस्ता घटनाहरूले हामीलाई सम्झाउँछ! तर एकछिन विचार गर्नुहोस्, तपाईं आफैले चाहिं त्यस्तो बहुमूल्य ज्ञान कसरी पाउनुभयो? यस भागमा हामी यो प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौं। परमेश्वरका जनहरूले जुन तरिकाले आध्यात्मिक ज्योति क्रमिक रूपमा पाए, त्यसबाट परमेश्वरको राज्य वास्तविक हो भनेर प्रमाणित हुन्छ। परमेश्वरको राज्यको राजा येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्रजालाई सत्यको ज्ञान सिकाउन सक्रिय भूमिका खेलेको सय वर्ष भइसक्यो।
के मसीही राज्य परमेश्वरको सुरुको उद्देश्यको भाग थियो? येशूले परमेश्वरको राज्यबारे अझ धेरै कुरा कसरी खुलाउनुभयो?
परमेश्वरको नामको सन्दर्भमा मसीही राज्यले के हासिल गरेको छ? तपाईं कसरी यहोवाको नाम उच्च पार्ने काममा भाग लिन सक्नुहुन्छ?
परमेश्वरको राज्य, यसका शासक र प्रजा अनि यसप्रति वफादार हुनुपर्नेबारे राम्रोसँग बुझ्नुहोस्।